ikhofi yekhokhele yokudla yekhekhe isinkwa China Manufacturer
Incazelo:Umshini wephrinta wekhekhe,Iphrinta ye-Cake Thenga,Iphrinta Yokuhlobisa Ikhekhe
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta ye-Cake > ikhofi yekhokhele yokudla yekhekhe isinkwa
Iphrinta yekhekhe iyimishini yokunyathelisa yedijithali ephezulu yamahhala ephezulu .it ayincike kunoma imiphi imikhawulo yempahla, uyaphrinta kuma-T-shirts, iminyango elayishayo, ingilazi, amapulethi, izimpawu ezihlukahlukene, i-crystal, i-PVC, i-acrylic, I-Metal, ipulasitiki, itshe, isikhumba njalonjalo nanoma yisiphi isithombe, futhi eduze kwezithombe zangempela kuze kube sezingeni eliphakeme Asikho isidingo sokwenza ipuleji yokunyathelisa, umbala omuhle futhi ocebile, ongenamandla wokulwa, olwa-ultraviolet, olula ukusebenza, ukuphrinta izithombe ngokushesha, ngokuhambisana nezindinganiso zokunyathelisa ezimbonini.
Umshini wokuprinta wekhekhe usetshenziselwa ukuphrinta izithombe ekudleni.Inezinhlobonhlobo ezingu-6 ezingaprinta izithombe ezimibalabala nezikhanyayo.Umphumela wokuphrinta ucacile.Umshini ungashintsha umsebenzi wezincwadi.
Iphrinta yekhekhe uthenge nge-inki edayayo ingaprinta kuzo zonke izinhlobo zokudla.Izinto zonke zinganyatheliswa njengezodwa eziyingqayizivele ngezithombe ezimibalabala
I-printer yokuhlobisa ikhekhe kufanelekile ngekhekhe, isinkwa, ibhisikidi, ama-macaroni ... izinhlobo zokudla. Ngaphandle kwalokho, futhi kungasebenza ngendwangu, igobolondo lefoni, ikhadi le-PVC, i-DVD, ibhodlela, isikhumba, insimbi, ipeni nokunye. Izindleko ezilahlekile futhi zisebenza kahle.
Umshini wephrinta wekhekhe Iphrinta ye-Cake Thenga Iphrinta Yokuhlobisa Ikhekhe Umshini wephrinta weThetile Umshini wephrinta weTile Umshini wephrinta yebha Umshini wephrinta we-Latte Umshini wephrinta we-Chocolate